निदाएका वेला मान्छे घुर्नुको कारण के हो ? - SangaloKhabar
निदाएका वेला मान्छे घुर्नुको कारण के हो ?
आफै निस्कने एक प्रकारको आवाज, जो सुतेर निधाएको बेलामा स्वास लिँदा निस्कछ , त्यसलाई घुर्नु ( स्नोरिङ ) भनिन्छ ।
यस्तै व्यक्ति भन्ने हुदैन । किनकी सबैको अंग एकैनासको हुदैन तर प्राय लोग्ने मान्छेमा बढी देखिन्छ । मोटो व्यक्ति, शारीरिक व्यायम नगर्ने व्यक्ति, मांसहारी व्यक्ति, सूर्तिज्यन्य पदार्थ तथा मदिराजन्य पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिमा यो समस्या बढेको पाइन्छ । हेल्थखबर
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २३, २०७३ समय: २०:०२:५८